Heerarka Asturnaanta Websaydhka | Martech Zone
Heerarka Asturnaanta Websaydhka
Jimco, Juun 8, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Marty Thompson
Marty iyo anigu waxaan joognay goobta Naadiga Warbaahinta Bulshada ee Chicago ay qabteen dadkii wanaagsanaa ee Edelman. Mawduuca wuxuu ahaa Transparency ee Baraha Bulshada waxaana ka qeyb galayaasha ka ahaa Tom Chernaik, oo ah agaasimaha guud Cmp.ly, Michael Kiefer, GM at BrandProtect, Rich Sharp, SVP ee Kooxda Caafimaadka Dijital ah Edelman iyo Roula Amire, Maareeyaha Maareynta Ragan.com. Doodda waxaa diiradda lagu saaray halista iyo halista la xiriirta baraha bulshada iyo sida shirkaduhu u qorsheyn karaan, u ilaalin karaan ugana jawaabi karaan arrimaha. Waxay ahayd dood weyn oo mid ka mid ah noocyada waaweyn ay hadda wax ka qabanayaan now Waxaan rajeynayaa in ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahiba ay bilaabaan inay iyaguna fiiro gaar ah u yeeshaan!
Xayeysiiyaasha xayeysiiska ah waxay soo saaraan qalab casri ah oo lagula socdo macaamiisha, wakaaladaha federaalka iyo kooxaha daneeya macaamiisha ayaa riixaya heerar adag oo asturnaanta. Ha raad raacin, dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee ka bixida ka bixitaanka webka ee Mareykanka ayaa sii xoogeysanaya, iyadoo daalacayaasha iyo shirkadaha si isku mid ah loogu cadaadinayo inay bixiyaan teknoolojiyada ka bixitaanka fudud ee lagu ilaalinayo macluumaadka shaqsiyeed ee gaarka ah. Horay ayaa Yurub uga jirtay: Dardaaranka Gaarka ah ee Yurub waa sharci u baahan goobaha inay si firfircoon uga helaan ogolaanshaha martida inay la socdaan. Eeg arrimaha taagan, iyo sidoo kale dakhliyada ka dhalan kara dhibaatooyinka kale.
Faahfaahintan waxaa soo saaray Dhiiran. Asturnaanta 'Ensighten Privacy' waa xalinta asturnaanta iyo u hoggaansanaanta taas oo hubineysa in ururinta xogta macaamiisha websaydhku ay si buuxda ugu hoggaansan tahay siyaasadahaaga gaarka ah iyo sidoo kale sharciga Mareykanka iyo kan caalamiga ah adoo kormeeraya dhammaan calaamadaha boggaaga. Asturnaanta 'Ensighten Privacy' waxay awood u siineysaa boggaga inay si buuxda ugu hoggaansamaan madaxyada biraawsarka ha raad raacin (DNT) iyo qodobbada ka-bixitaanka Sharciga Kukiyada ee UK, iyo sidoo kale kuu oggolaanaya inaad ku siiso macaamiisha xog-uruurinta ka-bixitaanka ama ka-doorbidashada boggaaga.
Tags: waafaqsanaantaiftiingaarka ahdaahfurnaanta
Dhegeystayaasha iyo Bulshada: Ma Ogtahay Farqiga u Dhexeeya?